musha / Dzidzo & Tsvakurudzo / tsvakurudzo / Economic Calendar
Karenda yezvemari inokosha yekutengeserana zvigadzirwa zvinowanzorambwa uye zvisingatarisirwi nevatengesi. Kuva mberi kwechiso; kuziva nguva yekusunungurwa kwezvemari kuburikidza nenzira yekarenda, chinhu chinonyanya kukosha kutsigira kushambadzira kwekuita. Kuva neruzivo rwakakwana, rakakwana uye rakanyatsonzwisiswa karenda rezvemari, rinokosha zvikuru uye vatengesi veFX mutengo uyu unotowedzera kusimbiswa.
sei tora uchishandisa Karenda yako
Isa dhesi yezuva rekarenda
Sarudza iyo kondinendi iyo data inopindirana nayo
Sarudza nyika ipi iyo data inosangana nayo
Deredzai karenda yenyu kuti musimbise mamwe mabhuku uye kubudiswa
Sarudza huwandu hwekukanganisa; kumusoro, mukati kana pasi
Zviitiko zvezvemari macro, zvinyorwa uye kubudiswa kwemashoko, rakabudiswa ne: hurumende, masangano ehurumende nemamwe masangano ega ega; dzakadai saMarkit nevanoremekedzwa zvikuru uye vanotarisirwa PMIs, zvinogona kuchinja zvakanyanya mari yemari, kunyanya kana ichienzaniswa nedzimwe mari yemari.
Nezvo mupfungwa mupfungwa dzeFXCC dzakaita zvekubatanidza uye intuitive kalendari yezvemari kune vatengi vanokosha. Sezvo nemakendendhe akawanda ezvemari ane zvese zvinoshandiswa uye zvikomborero zvatakasvika kuzotarisira kubva kune imwe gwaro rekare. Zvisinei, takawedzera zvimwe zvinyorwa uye chirevo chekutaridzika kuti tive nechokwadi chekarenda yedu yakawedzera kukosha kwevatengi vedu. Karenda yacho inewo inoratidza kuenzanisa kwemashamba ekugadzirisa kusunungurwa kwemashoko kwave nako.
Paunenge uchisarudza zvirongwa zvakasiyana-siyana nenzira yebhatani, vatengi veFXCC vachakwanisa kuisa zvavanoda.